Posted by kelartha on Wednesday, October 5, 2011 / Labels: အမေ ( ၁ ) / Comments: (0)
ဖွင့်ဟမိပြန် အမေ့ ဆိုတဲ့ ထိုအသံ…
ဆိုလိုက်မိပြန် အမေ့ ဆိုတဲ့ ထိုအသံ…
၀ါး ကနဲ ခြောက် မြှောက် ကနဲ ပင့်
ချီမ လင့်လည်း ဖွင့်အံမိပြန် အမေ့ ဆိုတဲ့ ထိုအသံ…
ထစ် ကနဲ ချုန်း အုန်း ကနဲ ညံ
ံ ကြားရသံလည်း ရွတ်အံမိပြန် အမေ့ ဆိုတဲ့ ထိုအသံ…
အမေ့ ပုံရိပ် အမေ့ စိတ်တွေ
စို့စို့ မျက်ရည် ကျမိ၏…
တို့တို့ မျက်ရည် သုတ်မိ၏…။
Posted by kelartha / Labels: မြတ်ဆရာ / Comments: (0)
“ ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏ” ဆိုပေမယ့်
“ အလှတွင် အယဉ်ဆင့် ” ဆိုပေမယ့်
“ အရမ်းပြင် အယဉ်ပျက်” တာလည်း ခဏခဏ
“ ဆင်တတ်မှ လှ ကြင်တတ်မှ ရ ” ဆိုပေမယ့်
“ ပေးကားပေး၏ မရ ” ခဲ့တာလည်း အကြိမ်ကြိမ်
“ အချိန်မီချုပ် အစုတ်သက်သာ ” ရအောင်
“ အာစရိယဂုဏော အနန္တော ” ဆိုပေမယ့်
” အသိခေါက်ခက် အ၀င်နက်” ခဲ့တာလည်း အခါခါ
အခါခါ ခွင့်လွှတ်တဲ့ မြတ်ဆရာ…။ သူငယ်ချင်း အရှင်ဝိစိတ္တ (ဓမ္မာစရိယ) MA ပြောပြလို့ ရေးဖြစ်တဲ့ ကဗျာလေးပါ ကျေးဇူးပဲ သူငယ်ချင်းရေ...။ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များလည်း အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အရှင်ကေလာသ(သာစည်) MA မဂဓ တက္ကသိုလ်၊ အိန္ဒိယ။
Posted by kelartha / Labels: အသွင်သဏ္ဌာန် နှင့် အနှစ်သာရ / Comments: (0)
Posted by kelartha / Labels: အပြစ်မြင်ခြင်း မမြင်ခြင်း / Comments: (0)
ရှင်အာနန္ဒာကို ပေဿနဒီကောသလမင်းက '' ဘုရားမှာ တစ်ပါးသူတွေကိုအပြစ်တင်မယ့် ကိုယ်.နှုတ်.စိတ်.အကျင့်တွေရှိသေးလားလို့ မေးလျှောက်လို့ '' မရှိတော့ဘူး'' လို့ဖြေတဲ့အခါမှာ မင်းကြီးက ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ။ '' မုိက်မဲကြတဲ့သူတွေဟာ သူတစ်ပါးရဲ့ဂုဏ်နဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးမဲ့တို့ကို မစူးစမ်း မဆင်ခြင်ဘဲနဲ့ ပြောဆိုတတ်ကြတယ်။ သူတို့ပြောဆိုတဲ့စကားတွေဟာ အနှစ်သာရအားဖြင့်မရှိ၊ ပညာရှိလည်း မယုံကြည်ကြပါဘူးတဲ့။ ပညာဥာဏ်ရှိတဲ့ လူလိမ္မာတွေကတော့ စူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးမှ ပြောဆိုတတ်ကြတယ်တဲ့။ အနှစ်သာရလည်း ရှိကြပါတယ်...တဲ့။" ညီလေး ညီမလေးတို့ကိုပြောချင်တာကတော့ စကားပြောဆိုတော့မယ်ဆိုရင် စူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးမှ ပြောစေချင်တယ်။ ကိုယ်ပြောတဲ့စကားကို အနှစ်သာရရှိအောင် ပြောစေချင်တယ်။ တရုပ်ပညာရှိကွန်ဖြူးရှပ်က ပြောခဲ့တယ်။ '' သဘောထားသေးသိမ်သူများသည် သူတစ်ပါးအပြစ်ကိုသာ မြင်တတ်သည်။ သဘောထားပြည့်ဝသောသူသည်ကား မိမိအပြစ်ကိုသာမြင်သည်။ ထို့ထက်ပိုရ်ျ သဘောထားပြည့်ဝသူသည်ကား မည်သူ့ကိုမျှ အပြစ်မမြင်တော့ဘူး'' တဲ့။ ညီလေး ညီမလေးတို့ကို သဘောထားပြည့်ဝစေချင်တယ်။ ဒါမှ ညီလေး ညီမလေးတို့ဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မမြင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်မှာပေ့ါ။ ဟုတ်ပြီလား
ညီလေး ညီမလေးတို့ကို အရမ်းချစ်လို့ပြောတယ်လို့မှတ်ပါနော်...........။
အရှင်ကေလာသ(သာစည်) MA မဂဓ တက္ကသိုလ်
Posted by kelartha / Labels: ဘဝတက္ကသိုလ်..... / Comments: (0)
ဝါဆိုလပြည့် ဓမ္မစကြာနေ့ အခါတော် ဝါဆိုလမြတ်နှင့် ဝါကပ်သံဃာတော်
Posted by kelartha on Saturday, July 30, 2011 / Labels: ဝါဆိုလပြည့် ဓမ္မစကြာနေ့ အခါတော် ဝါဆိုလမြတ်နှင့် ဝါကပ်သံဃာတော် / Comments: (0)
လှမ်းလာခဲ့ပါမိတ်ဆွေ. ..လာကြည့်လှည့်ပါမိတ်ဆွေ.... လုပ်ကြည့်လှည့်ပါမိတ်ဆွေ.
Posted by kelartha / Labels: လှမ်းလာခဲ့ပါမိတ်ဆွေ. ..လာကြည့်လှည့်ပါမိတ်ဆွေ.... လုပ်ကြည့်လှည့်ပါမိတ်ဆွေ. / Comments: (0)
မိမိဟာ ဘာသာရေးစာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်သည်ဟု ဆိုရာဝယ်..
စာအုပ်ထဲမှာ သကြားသီးများ စားသောအခါ ဖန်စိမ့်ဖန်စိမ့်လို့ ပြောတာကို မိမိကလည်း ဖန်စိမ့်ဆိုတဲ့အရသာကို တစ်ခါထည်း ခံစားလိုက်သလိုပဲ ဖြစ်နေတတ်တယ်....
တကယ်တမ်း အပြင်မှာ သကြားသီးစားဖူးမှသာလျှင် ဖန်စိမ့်လား.. ချိုလား.. ချဉ်လားဆိုတာ ကိုယ်တိုင် သိနိုင်မယ်လေ...
သူများစားတာ .. သူများ စားဖူးတာ.. သူများ စားပြီး လိမ်ပြောတဲ့အရသာတွေကို ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ ..လုပ်ကြံပြီး ဟုတ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်နေတာဟာ.... သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်မဟုတ်သလို...
မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်း ထိုထိုဤဤအဖြစ်နဲ့ပဲ ဒိနားတင်ပဲ ကျန်ရစ်ဘ၀နဲ့ အရိုးထုတ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ပဲ .... လူတိုင်း စွန့်ပစ်လို့ လူမလေး ခွေးမခံ့ဆိုသလို ဖြစ်နေပေရော့ထင့်...
မိမိကိုယ်မိမိ စိတ်ခိုင်မာမယ် ဆိုတာ ယုံကြည်ရင်ဖြင့်..... အသက်ပြည့်လို့ မိမိကိုယ် မိမိ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် ဆိုရင်ဖြင့်... မိမိကိုယ် မိမိ .. မိမိဘ၀ မိမိ ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်...
ဘယ်သူ့ကိုမှမယုံသလို မင်းကိုယ်မင်းလည်း မယုံပါနဲ့..
လက်ခံပြိးမှ သူများကိုလည်း ငါပြောခဲ့သလို မယုံပါနဲ့ဆိုတာကိုပဲ လမ်းညွှန်သင့်တယ်လို့